လမ်းကြား သရဲ (နောက်ဆုံးပိုင်း) | ပျူနိုင်ငံ
(မှတ်ချက်။ ။ အသက် ငယ်ရွယ်သူများ၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်
တတ်သူများ၊ နှလုံးရောဂါသည်များနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်များ
ယခင် အပိုင်း(၄)မှ အဆက် ...
ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သံတွေကြောင့် သူတို့နေထိုင်ရာအလွှာရှိ နံဘေး
ခန်းက လူတွေလည်း အပြင်ထွက်ကြည့်ကြပါတယ်။ သူတို့လည်း
မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နေခဲ့ကြပါတယ်။ မိနစ်(၂၀) နီးပါး ၀ိုင်းပြုစု
အပြီးမှာ သတိလစ်သွားတဲ့ လူငယ်လည်း သတိပြန်ရလာပါတယ်။
အကြောက်လွန်နေသူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘုရားစင်က သောက်တော်ရေတွေ
စွန့်ပြီး ပက်ဖြန်းတဲ့သူက ဖြန်း၊ လည်ပင်းမှာ စိတ်ပုတီး ဆွဲပေးကြနဲ့
အလုပ်ရှုပ်ကြပါတော့တယ်။ သတိပြန်ရလာသူအား စိတ်ငြိမ်သွားရန်
ဆရာဝန်က ဆေးတစ်လုံး တိုက်လိုက်ပါတယ်။
အခန်းပိုင်ရှင် မိသားစုက အမှိုက်ပြစ်ရာ လမ်းကြားတွင် သူတို့အုပ်စု
ခေါစာပြစ်ခဲ့တဲ့ လင်ဗန်းနဲ့ ပြာမှုန့်တွေကို မနက်ကြမှ သန့်ရှင်းရေး
လုပ်လိုက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့ထဲကတချို့က အဲဒီနေရာကို
နောက်တစ်ခေါက် သွားကြည့်ချင်ကြောင်း ပြောကြပါတယ်။ သူတို့တတွေ
အခန်းအပေါက်ဝကနေ အဲဒီလမ်းကြားလေး ထိပ်ဆီ ထွက်ကြည့်ကြ
ပါတယ်။ တိုက်တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်နေပါပြီ။ ခုနက မီးပွင့်လာတဲ့
နံဘေးအခန်းတွေလည်း မီးတွေပိတ်ပြီး ပြန်အိပ်သွားပုံ ရပါတယ်။ သူတို့
နံဘေးအခန်းမှ အိမ်မြှောင်တစ်ကောင်ရဲ့ စူးစူးဝါးဝါး စုတ်ထိုးသံကြောင့်
သူတို့အားလုံး လန့်သလိုလို ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ လက်က နာရီကို
ကြည့်လိုက်တော့ (၁)နာရီ ထိုးဖို့ မိနစ်အနည်းငယ် လိုပါသေးတယ်။
အခန်းအပေါက်ဝကနေ အမှိုက်ပြစ်ရာလမ်းကြားဆီကို သူတို့အားလုံး
ထပ်သွားကြဖို့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ သူတို့အားလုံး လမ်းကြား
လေးဆီမှာ ဘာများ ဆက်ဖြစ်လာမလဲလို့ စိုက်ကြည့် နေကြပါတယ်။
အခန်းအားလုံးဆီကနေ အိမ်မြှောင်တွေရဲ့ ဆက်တိုက် စုတ်ထိုးသံကြောင့်
သူတို့ အရမ်းအံ့သြနေပါတယ်။ ရုတ်တရက် အမှိုက်ပြစ်ရာ လမ်းကြား
ထိပ်ရှိ မီးရောင်အောက်မှာ လူအရိပ်နှစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူတို့
အားလုံး နည်းနည်း တွေးဝေသွားပါတယ်။ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က …
“ဖြစ်ချင်တာဖြစ် သွားကြည့်ကြရအောင်၊ အရမ်းကြီး ကြောက်မနေနဲ့”
ဒီလိုနဲ့ သူတို့အားလုံး ခပ်လန့်လန့်ဖြင့် လမ်းကြားထိပ်ကို အသွား၊
မရောက်တရောက်လောက်မှာ မီးရောင်အောက်က အရိပ်နှစ်ခုဟာ
သူ့အလိုလို ပျောက်သွားပြန်ပါတယ်။ သူတို့ထဲက တချို့လည်း
ဘောင်းဘီးက ခါးပတ်တွေ ဆွဲဖြုတ်ပြီး တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် ခါးပတ်နဲ့
ရိုက်မယ့်ပုံစံ အသင့်ပြင်ထားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့ထဲက
“ခုနက ဒီလမ်းထိပ်က ဟိုဟာ(ကလေးကစားစရာ) လေးရော”
လမ်းထိပ်ကို ပထမ တခေါက်အလာမှာ အတွင်းကနေ လွှင့်ပြစ်လိုက်တဲ့
ကလေးကစားစရာ အရုပ်ကားလည်း မတွေ့ရတော့ပါ။ လမ်းကြား
ရှေ့ကို အရောက်၊ အတွင်းကို ကြည့်လိုက်တော့ “ခေါစာ” ပြစ်ထားတဲ့
လင်ဗန်းလည်း မရှိတော့ပါ၊ အမှိုက်ပြစ်တဲ့ အပေါက်ဝအောက်မှာ
ကစားစရာ အရုပ်ကားလေး ရောက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြာမှုန့်
တွေလည်း ပြန့်ကြဲနေပြီး နင်းပြီးလျှောက်ထားသလို လူခြေရာ ပုံစံ
အများအပြားကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ လေး …. ငါးမိနစ်လောက်
ဟိုကြည့် ဒီကြည့်အပြီးမှာ သူတို့အားလုံး အခန်းရှိရာဆီ လှည့်ပြန်
ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ခန်းသို့ ရောက်လုဆဲဆဲမှာ အနောက်ဖက်မှ “တောက်”
ခေါက်သံ တစ်ခုကို ပီပီသသ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ လှည့်ကြည့်လိုက်
တော့ ဘာမျှ မတွေ့ရပါ။ သူတို့အားလုံး အခန်းအတွင်းကို ၀င်ကြ
တော့မယ့်ဆဲဆဲမှာ လူတစ်ဦးရဲ့ ငိုရှိုက်သံလိုလို အသံ သဲ့သဲ့တချို့
ကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ နောက်တခေါက် သွားကြည့်ဖို့ သူတို့
အလည်ရောက်နေသူတွေနဲ့ စကားတပြောပြောဖြင့် အိမ်ရှင်ဆရာဝန်
ပါ ဧည့်ခန်းထဲမှာ အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူဟာ အိမ်မက်
မက်နေသလိုလို အပြင်တွင် တကယ်ခံစားနေရသလိုလို အိမ်မက်တစ်ခု
ကို မက်ခဲ့ပါတယ် …
ဆရာဝန်၊ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့ “ခေါစာ” ပြစ်ခဲ့တဲ့ ဗလတောင့်တောင့်
လူငယ် သုံးဦးတို့ဟာ သူတို့ အိမ်ခန်းထဲမှာ ထိုင်ပြီး စကားပြောနေကြ
ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အပြင်က ဧည့်ခေါ် ခေါင်းလောင်းတီးသံ ကြား
ရပါတယ်။ တံခါးကို သွားဖွင့်ကြည့်တော့ အသက်လေးဆယ်ကျော်
အရွယ် လူကြီးတစ်ဦးနဲ့ အသက် ရှစ်နှစ် … ကိုးနှစ်အရွယ် ကလေးငယ်
တို့ကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့က နံဘေးအခန်းမှာ နေသူများဖြစ်ကြောင်း၊
ပြောပြစရာ ရှိတယ်လို့ ပြောဆိုပြီး သူတို့နေထိုင်ရာ ကပ်လျှက် အခန်း
ထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ အခန်းထဲ ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ
ကလေးငယ်က သူတို့သုံးဦးကို အခန်းအတွင်းထဲရှိ ရေချိုခန်းကို
လက်ညှိုး ထိုးပြပါတယ်။ ရေချိုးခန်းအတွင်းကို ရောက်တော့ အိမ်သာ
အပေါ်ရှိ ရေဆွဲချရာ ရေပုံးထဲကို ပစ္စည်းတစ်ခုခု နှိုက်ယူပေးဖို့ လက်ဟန်
ခြေဟန်နဲ့ ပြပါတယ်။ ရေဆွဲချရာ ပုံးထဲကို နှိုက်ကြည့်လိုက်တော့
ပလပ်စတစ်နဲ့ သေသေချာချာ ထုတ်ပိုးထားတဲ့ ကလေးကစားစရာ
အရုပ်ကားလေးတစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကလေးငယ်က
အုတ်နံရံဖက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်။ အုတ်နံရံဟာ တီဗွီမျက်နှာ
ပြင် တစ်ခုလိုဖြစ်လာပြီး သင်္ချိုင်းတစ်ခုကို မြင်နေရပါတယ်။ သင်္ချိုင်းထဲရှိ
လမ်းအကွေ့အကောက် အတော်များများကို ဖြတ်ကျော်အပြီးမှာ အုတ်ဂူ
တစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်။ ကလေးငယ်က ရေပုံးထဲမှာ ရရှိလာတဲ့ အရုပ်
ကားလေးကို အဲဒီအုတ်ဂူပေါ်မှာ ထားပေးဖို့ ပြသပါတယ်။ အဲဒီနောက်
ရုတ်တရက်ဆိုသလို နံရံပေါ်က မြင်ကွင်းရော ကလေးငယ်ပါ
အဲဒီချိန်မှာ သူတို့သုံးဦးကို အခန်းအတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်လာတဲ့
လူကြီးဖြစ်သူက စကားပြောဖို့ ဧည့်ခန်းအတွင်းကို ခေါ်ဆောင်
သွားပါတယ်။ သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၅)နှစ် နီးပါးက ဒီတိုက်မှာ
အလုပ်လုပ်ရင်း နေထိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်သား တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊
အလုပ် လုပ်တဲ့ နေရာကနေ ကလေးကစားစရာ ပစ္စည်းတစ်ခုကို
ယူဆောင်လာမိကြောင်း၊ တနေ့တော့ အခန်းထဲမှာ သောက်ရင်း
စားရင်းကနေ မူးပြီး သူအိပ်ပျော်သွားကြောင်း၊ အဲဒီနောက် သူ
သတိလစ်သလို ဖြစ်သွားကြောင်း၊ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တစုံတယောက်
ရဲ့ ၀င်ရောက်ပူးကပ်ခြင်းကို ခံရပြီး အခန်းဖော်တွေနဲ့ အချင်းများ
ခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ဆုံးမှာ သူ့အခန်းဖော် သူငယ်ချင်း အလုပ်သမား
များက သူ့ကို ရက်စက်စွာ သတ်ပြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ သူ သေဆုံးပြီး
တစ်နှစ်ကျော်တဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာပြည်ရှိ ကျန်ရစ်သူ သူ့မိသားစု
က ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အမျှအတန်း ပေးဝေခဲ့ကြောင်း၊ သူ သေဆုံး
တဲ့ ဒီနေရာမှာ ယနေ့အချိန်အထိ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မူ
များ လုံးဝ မလုပ်ရသေးကြောင်း၊ မြန်မာပြည်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော
သူ့သားသမီးများအနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သူ သူ့သားလေးမှာ ယခုအခါ
ပင်ပင်ပန်းပန်း ဆင်းဆင်းရဲရဲဖြင့် မိသားစုအား လုပ်ကျွေးနေရကြောင်း၊
သူ့အတွက် အမျှအတန်းပေးဝေဖို့နဲ့ သူ့သားအကြီးဆုံးလေးကို
ဒီနိုင်ငံမှာ တရားဝင်အလုပ်သမားအဖြင့် အလုပ် လုပ်ခွင့်ရဖို့
ကူညီပေးစေလိုကြောင်း ပြောပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရှိ သူ့မိသားစု
ထံ ဆက်သွယ်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုကိုလည်း ပေးပါတယ်။ အဲဒီနောက်
မနက်စောစောစီးစီး ဧည့်သည်တွေထဲမှ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့
“ခေါစာ” ပြစ်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တို့ နှစ်ဦး ညက အိမ်မက်ဆိုးများ မက်ကြောင်း
အိမ်ရှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက် (၂) ရက်ခန့်အကြာ
မှာ ဆရာဝန်ဖြစ်သူဟာ အလုပ်ထဲကနေ အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ရှေ့ သံတံခါးကို ဖွင့်အ၀င်မှာ သူ့နားထဲမှာ နံဘေးကနေ တစုံ
တယောက် တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ သူ့ကို
ပြောသွားတဲ့ စကားသံက …
“ညီလေး၊ မင်း ထီထိုးထားတာ … တိုက်ပြီးပြီလား …”
ရုတ်တရက် သူ ကြောင်သွားပါတယ်၊ နံဘေးကို ကြည့်လိုက်တော့လည်း
သူ့နံဘေး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်သူကိုမျှ မတွေ့ရပါ။ ဒါနဲ့ သူလည်း
ထီထိုးခဲ့တာကို သတိရသွားပြီး တိုက်အောက်ထပ်ကို ပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။
တိုက်နံဘေးက အိန္ဒိယကုန်စုံဆိုင်အရှေ့ရှိ သတင်းစာအပုံမှာ သူ ထိုးထား
တဲ့ ထီနံပါတ်ကို ရှာဖွေလိုက်ပါတယ်။ သူ အရမ်းအံ့သြ သွားပါတယ်။
သူ့ သူငယ်ချင်း ရယ်စရာအဖြစ် ပြောခဲ့တဲ့၊ သူ့အိမ်မက်ထဲမှာ သရဲ
ပေးခဲ့တဲ့ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ နောက်ဆုံးဂဏန်းလေးလုံးဟာ ထီရဲ့
ဒုတိယဆုနေရာမှာ တွေ့လိုက်ရလို့ပါ။ ထီထိုးထားပေမဲ့ ထီပေါက်ဖို့
လုံးဝ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ သူ့အဖြစ်ဟာ သူ့ကိုယ်သူ မယုံသလိုနဲ့
သတင်းစာပေါ်က နံပါတ်ကို ကြည့်လိုက် လက်ထဲမှာ ထိုးထားတဲ့
ထီ စာရွက်ကို ကြည့်လိုက်နဲ့ ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေပါတယ်။
အိမ်ရှင်ဆရာဝန်ဖြစ်သူဟာ သူ့မိသားစုကို ထီပေါက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း
စုံကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ သူ့ဇနီးသည်နဲ့ မိခင်ဖြစ်သူတို့က ကွယ်လွန်
သွားသူအတွက် ဆွမ်းသွတ်အမျှ ပေးဝေဖို့၊ အိမ်မက်ထဲမှာ ပေးခဲ့တဲ့
ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ မယုံတ၀က်
ယုံတ၀က်နဲ့ အိမ်မက်ထဲက ဖုန်းနံပါတ်ကို သူ ဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က တယ်လီဖုန်းပိုင်ရှင်မိသားစုရဲ့ အကူအညီပေးမှုကြောင့်
ကျန်ရစ်သူ မိသားစုနဲ့ သူ အဆက်အသွယ် ရခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ လွန်ခဲ့
တဲ့ (၁၅)နှစ်လောက်က ဒီတိုင်းပြည်မှာ အလုပ်လာလုပ်ရင်း ကွယ်လွန်
ခဲ့သူနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးသူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုကို
အကူအညီပေးချင်ကြောင်း ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ နောက်ရက်တွေမှာ
သူ ထီပေါက်လို့ ရခဲ့တဲ့ ငွေတွေထဲက မြန်မာငွေ (၁၀) သိန်း တန်ဖိုးကို
လွှဲပို့ပေးလိုက်သလို ကွယ်လွန်သူရဲ့ သားအကြီးဆုံးဖြစ်သူကိုလည်း
ဒီတိုင်းပြည်မှာ တရားဝင် အလုပ်သမားအဖြစ် လာရောက်နိုင်အောင်
အစစ အရာရာ အကုန်အကျခံ ကူညီမယ်ဖို့ ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီရက်တွေ နောက်ပိုင်းမှာ ဆရာဝန်ဖြစ်သူဟာ သူ့အခန်းနဲ့
ကပ်လျှက်အခန်းက အခန်းပိုင်ရှင်တွေကို လိုက်လံစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။
အခန်းပိုင်ရှင် တရုတ်အဖွားကြီးဟာ အဲဒီအခန်းမှာ တခါတရံ
သာ လာနေလေ့ရှိကြောင်း နံဘေးခန်းတွေက ပြောပြကြပါတယ်။
ဒါနဲ့ အခန်းပိုင်ရှင် တရုတ်အဖွားအို ရှိရာဆီ သူ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်အဖွားအိုက ဆရာဝန်မိသားစုအခန်းနံဘေးရှိ သူ့အခန်း
ဟာ နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ သူ့သမီးနဲ့ သမက်တို့ ပိုင်ဆိုင်
တဲ့ အခန်းဖြစ်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၅)နှစ် ပတ်ဝန်းကျင်က သူ့တို့
မိတ်ဆွေ တရုတ်လူမျိုးတစ်ဦးက သူ့ အလုပ်သမားများ နေထိုင်
ရန် ဌားရမ်းခဲ့ဖူးကြောင်း၊ အဲဒီနောက်တော့ အိမ်ဌားတွေ ခဏခဏ
ပြောင်းရွှေ့ကြကြောင်း၊ ဒါနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်သူကိုမျှ မဌားတော့
ပဲ သူ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခင်က ဘာမျှ မဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူ့အခန်းဟာ
ညဖက်တွေမှာ သရဲခြောက်သလို ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ ဖြစ်ကြောင်း၊
ဒါကြောင့် ဘယ်သူကိုမျှ ထပ်မဌားတော့ပဲ တခါတရံ နေ့လည်ပိုင်းတွေ
မှာ သူ အလည်လာပြီး နေခဲ့ကြောင်း၊ ညဖက်မှာ မအိပ်ရဲတာကြောင့်
ယခုအခါ သူတို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းအဟောင်းများသာ ထားရှိသော
စတိုးခန်းအဖြစ် အသုံးပြုကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။
ဆရာဝန်ဖြစ်သူက တရုတ်အဖွားအိုအား လွန်ခဲ့သော (၁၅)နှစ်ခန့်က
အဲဒီအခန်းမှာ သူ့သူငယ်ချင်း အလုပ်သမားတစ်စု နေထိုင်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊
သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ဟာ အရက် အလွန်သောက်သောကြောင့်
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း၊ ကွယ်လွန်သူ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့
ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ အဲဒီအခန်းထဲမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း၊ သူ ဒီတိုက်ကို
ပြောင်းရွှေ့လာပြီး မကြာမဏဆိုသလို ကွယ်လွန်သူက အိမ်မက်ပေး
ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် အဲဒီအခန်းထဲမှာ ကွယ်လွန်သူအတွက် ရည်စူး
ပြီး ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တဲ့ ပွဲတစ်ခု လုပ်ချင်
ကြောင်း ခွင့်တောင်းခံပါတယ်။ အခန်းပိုင်ရှင် အဖွားအိုကလည်း
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက် တစ်ခုမှာ ဆရာဝန်မိသားစုနဲ့ ရင်းနှီးသူ
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများဟာ အဲဒီတိုင်းပြည်ကို ကြွရောက်နေတဲ့
မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကို ပင့်ဖိတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တရုတ်မိသားစု
ပိုင်ဆိုင်ရာ အခန်းအတွင်း ကွယ်လွန်သူအတွက် ရည်စူးပြီး ဆုတောင်း
မေတ္တာပို့သလို သရဲခြောက်တယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အမှိုက်သွား
ပြစ်ရာ လမ်းကြားဆီမှာလည်း ပရိတ်တရား နာယူခဲ့ကြပါတယ်။
တရားပွဲအပြီး ဆရာဝန်နဲ့ သရဲခြောက် မခြောက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့
ငယ်သူငယ်ချင်းတို့ဟာ အဲဒီအခန်းထဲရှိ အိမ်သာအပေါ်မှ ရေဆွဲချရာ
ရေပုံးထဲကို ရှာဖွေ ခဲ့ကြပါတယ်။ ရေပုံးအတွင်းက ပလပ်စတစ်နဲ့
သေသေချာချာ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ ကလေးကစားစရာ အရုပ်ကားလေး
တစ်စီးကို တွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သရဲတစ္ဆေ မယုံကြည်တဲ့ ဆရာဝန်
ဟာ သူ့အယူအဆကို စွန့်လွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
သူတို့နှစ်ဦးဟာ အရုပ်ကားလေးကို တရုတ်သင်္ချိုင်း တစ်ခုခုမှာ သွား
ထားပြစ်ဖို့ စိတ်ကူးကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဌားကားတစ်စီးကို ဌားပြီး
တရုတ်သင်္ချိုင်းတစ်ခုသို့ သွားရောက်ချင်ကြောင်း ကားသမားကို ပြော
ပါတယ်။ ကားသမားက ဘယ်သင်္ချိုင်းလဲလို့ မေးတော့ သူတို့နှစ်ဦး
လည်း တရုတ်သင်္ချိုင်းဖြစ်ရင် ပြီးရောလို့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့
သူတို့နှစ်ဦး အဌားကားရဲ့ နောက်ခန်းကနေ လိုက်ပါခဲ့ကြပါတယ်။
ကားသမားက ရှေ့ခန်းမှာ ကားမောင်းနေရင်း တရုတ်လို ပြောနေပါ
တယ်။ သူတို့ကတော့ ကားသမား အဌားကားဌာနနဲ့ တရုတ်လို
ပြောနေတယ်လို့ပဲ ယူဆနေကြပါတယ်။ ကားဟာ နာရီဝက်နီးပါး
ကြာအောင် မောင်းနေချိန်မှာ သူတို့ စိတ်ထဲ ဒီကားသမား ပိုက်ဆံ
ပိုလိုချင်လို့ လှည့်ပတ်မောင်းနေတယ် ထင်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်
ကားသမားကို ဘယ်တော့ရောက်မလဲလို့ မေးလိုက်တော့ ကားသမား
က ခင်ဗျားတို့ သွားချင်တဲ့ နေရာကို မကြာခင် ရောက်တော့မှာပါလို့
ပြန်ဖြေပြီး တစ်ယောက်တည်း တရုတ်လို ဆက်ပြောနေပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တရုတ်သင်္ချိုင်းကုန်းတစ်ခုရဲ့ ရှေ့မှာ ကားသမားက ကားကို
သူတို့နှစ်ဦးလည်း တရုတ်သင်္ချိုင်းဝန်းထဲကို ရောက်ပြီး ဟိုအုတ်ဂူပေါ်
တင်ခဲ့ရင် ကောင်းနိူးနိူး ဒီအုတ်ဂူပေါ်မှာ ထားခဲ့ရင် ကောင်းနိူးနိူးနဲ့
သင်္ချိုင်း အလယ်က လမ်းမကြီးအတိုင်း ၀င်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရုတ်တရက်
သင်္ချိုင်းလမ်းမကြီးရဲ့ လက်ဝဲဖက် တစ်နေရာကနေ လေချွန်သံကို
ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ ကလေးငယ် တစ်ဦးက သူတို့ကို
လက်ယက်ပြီး ခေါ်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကလေးငယ်ရှိရာဆီ သူတို့ သွားကြ
ပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ နံဘေးနားကို မရောက်ရှိခင် သူတို့ရဲ့ မျက်စိရှေ့
မှာပဲ ကလေးငယ်ဟာ ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်သွားပါတယ်။ လှမ်းခေါ်
ခဲ့တဲ့ နေရာဆီကို ရောက်အောင်သွားကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ အရမ်း
ထိန့်လန့်သွားပါတယ်။ အုတ်ဂူလေး တစ်ခုပါ။ အဲဒီအပေါ်မှာ သူတို့
“ခေါစာ” ပြစ်ခဲ့တဲ့ လင်ဗန်းကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးလည်း
ယူဆောင်လာတဲ့ ကစားစရာ အရုပ်ကားလေးကို အုတ်ဂူပေါ်မှာ တင်ပြီး
တရုတ်သင်္ချိုင်းအပေါက်ဝကို ပြန်ထွက်လာတော့ အလာမှာ ဌားစီးခဲ့တဲ့
ကားနဲ့ ကားမောင်းသူကို တွေ့ရတာကြောင့် ကားဌားချင်ကြောင်း
ပြောပြီး ကားပေါ်သို့ တက်လိုက်ပါတယ်။ ကားပေါ်မှာ ဆယ်မိနစ်
ကျော်ကျော် ထိုင်နေတဲ့ချိန်အထိ ကားမမောင်းတာကြောင့် ကားသမား
ကို ဘာဖြစ်လို့ မမောင်းသလဲဆိုပြီး မေးကြည့်လိုက်တော့ ကားသမားက
“ဒီသင်္ချိုင်းဆီကို အလာမှာ ခင်ဗျားတို့ နှစ်ယောက်နဲ့ အတူတူ ပါလာ
တဲ့ ကောင်လေးရော ပြန်မလိုက်တော့ဘူးလား ….”
သူတို့နှစ်ဦး ကားတံခါးဖွင့်ပြီး ကားပေါ်ကနေ မပြေးရုံတမယ်
ပြန်ဆင်းတော့မလို ဖြစ်သွားပြီးမှ ….
“သူ ပြန်မလိုက်တော့ဘူး … လာခဲ့တဲ့နေရာကို အမြန်ဆုံး မောင်းပါ”
Posted by ကိုအောင် at 23:24
အမလေး .. ကိုအောင်ရေ ..
ည ၁၂ နာရီ ထိုးခါနီး မအိပ်ခင် ဖတ်လိုက်တာ။
စိတ်ဝင်စားဖို့လဲကောင်း ... ကြောက်လဲကြောက်နဲ့ အဆုံးထိဖတ်လိုက်တယ်။ အဲဒါမျိုးတွေက တကယ်ပဲရှိတယ်နော်။
ကျမ တခါကြုံရဖူးတာရှိသေးတယ်။ အားမှပဲ ပြန်စဉ်းစားပြီးရေးတော့မယ်။ အဆုံးသတ်ထိ ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးပါပဲ။
17 January 2010 at 01:11
ကိုအောင်ရေ ပြီးမှပဲ ပို့စ်အကုန်လုံးကို တခါတည်း လာဖတ်သွားပါတယ်။ တော်တော် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲ။ ကျွန်မက ယုံတော့ ယုံတယ် တခါမှ အချောက်မခံဖူးဘူး။ ဒီလို လူအများနဲ့ တခါလောက် မြင်ဖူးချင်လိုက်တာ။ တယောက်တည်းတော့ အချောက်ခံမရဲဘူး။
“တောက်” လို့တက်ခေါက်တာ
18 January 2010 at 06:03
ကလေးက သချိုင်္င်းရှိရာကို လမ်းပြခေါ်သွားတဲ့ အကွက်ကလေး လန်းတယ်..း)
I m very interesting of your writting.Is this real history?I can read Burmes font but not so good in writting.I"m proud of your description.
၁၂ နာရီထိုးခါနီးမှာ ဒီပို့စ်ကို အဆုံးသတ် ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ကြောက်တတ်တဲ့သူ မဟုတ်ပေမယ့်၊ ထိုင်နေတဲ့ အခန်းရဲ့ အပြင်ဘက်နားက မုန့်ကြွပ်ဝါးသံ သဲ့သဲ့ ကြားလိုက်ရတယ်။ ဒါနဲ့ အပြေးလေးထွက်ကြည့်တော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှ မရှိဘူး။ ပြန်လှည့်လိုက်တော့ နောက်ဘက်က မုန့်ကြွပ်ဝါးသံ ပြန်ကြားလိုက်ရတယ်။ ထပ်တူထပ်မျှပဲ။
18 January 2010 at 18:00
ကိုရောင်ဂန်း က မုန့် ကြွပ်ဝါးသံကြားရလို့ဗိုက်ဆာသွားသလား ဟင်
း-) စတာနော် စိတ်မဆိုးကြေး
20 January 2010 at 04:33
မကြောက်တတ်တဲ့ ဆရာဝန်ဆိုတော့ တော်သေးတာပေ့ါ ကုသိုလ်လည်းရ ငွေလဲရ။
ဆရာဝန်ရဲ့ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်အတွက် သာဓု သာဓု သာဓုပါတော်..
သေသွားသူကလည်း သတိရှိသူကို အရွေးတော်လို့ကြောက်တတ်တဲ့သူဆိုရင် အခုထိ သူလည်း မကျွတ် ကလေးသရဲကလည်း မြန်မာသရဲကို လွှတ်ပေးမှာ မဟုတ်။ အခုတော့ အားလုံး အဆင်ပြေ သွားတာပေ့ါ။ ဟတ်ပီးအဲန်ဒင်းဖြစ်သွားလို့သရဲဇတ်လမ်းက ဖတ်လို့ ကောင်းသွားပါတယ်။
20 January 2010 at 04:38
ဒါနဲ့ တခုလောက် သိချင်လို့ 
အမှိုက်ပစ်တဲ့နေရာ အဖုံးပွင့်ပြီး အလိုလိုပိတ်တာကို လက်ညိုးထိုးပြီး သတိလစ် သွားတဲ့သူ က ဘာမြင်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ရေးပြပါအုန်း။
20 January 2010 at 04:41
ကော်မန့်လာရေးတဲ့ ဘလော့ဂါ ညီအကိုမောင်နှမ အားလုံး ကျေးဇူးပါ ...။
Anonymous အနေနဲ့ ကော်မန့်လာရေးသူ ခင်ဗျာ
ဒီဇာတ်လမ်းကို ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လို သဘောထားပါ ..း)
ဆောင်းရေ သတိလစ်သွားတဲ့ လူက ဘာမြင်ခဲ့လဲတော့
မသိဘူး၊ နောက်တခါ အဲဒီတိုက်ကို သွားလည်ဖို့ ပြောတိုင်း ဘယ်လို ပြောပြော လိုက်ကို မလိုက်တော့ဘူး။
20 January 2010 at 17:30
ကိုအောင်သရဲပုံပြင် ကိုတော့ကြိုက်သွားပြီ နောက်တပုဒ် လောက်.......
21 January 2010 at 04:01
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလို စိတ်ခြောက်ခြားစရာလည်းကောင်းပါတယ် ကိုအောင်ရေ ...
ခုတော့ ကလေး သရဲရော လူကြီးသရဲပါ ကျွတ်တန်းဝင်လောက်သွားရောပေါ့နော် ။
စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ ဆရာဝန်ကို ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ အနေနဲ့နောက်ထပ် ချဲနံပါတ်လေးပေးခဲ့ရင် ကောင်းမှာပဲ ...
သရဲကြီးရဲ့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုလည်း အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ ။
ပြီးတော့ အဲ့ဒီလူသတ်မှုမှာ ပါခဲ့တဲ့လူတွေရော ဘာမှ ဒုက္ခမရောက်ကြဘူးလား မသိဘူးနော် ။
21 January 2010 at 06:06
ဒီ အပုဒ် ဖတ်ရတာ
ပိုကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ် ..
ကြက်သီးတွေ လည်း ထမိတယ် ..
လှေကားကနေ အတတ်အဆင်း ဆိုလို့
ကိုယ့် တိုက်ခန်း အတတ်အဆင်း
ကျွန်တော် ဒီ post ကို အရမ်းကြိုက်လို့ ကျွန်တော်ဆိုဒ်မှာတင်ခွင့်ပြုပါဗျာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
9 June 2010 at 21:26
Myo Set said...
တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ အီးမေးလ်ဖော်ဝပ် သာရရှိပြီး ရေးသူ မပါဝင်၍ ခွင့်ပြု ချက် မရယူ လိုက်နိုင်ပါ။ အနူးအညွတ်တောင်းပန်၍ ဖျက်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။
10 June 2010 at 04:20